Tirada dhimashada mudaharaadayasha , waqooyiga Hindiya oo sii kordheysa – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Tirada dhimashada mudaharaadayasha , waqooyiga Hindiya oo sii kordheysa
Tirada dhimashada ka dhacday Uttar Pradesh, waqooyiga Hindiya, ayaa gaartay 11, rabshadaha ka dhashay Isku soo baxa ayaa dhigaya banaanbaxyo diidaya sharciga dhalashada, sida uu ku soo waramay weriyaha Sky News Arabia ee magaalada New Delhi Sabtidii.
Ilo caafimaad ayaa sheegay in 11 qof, oo uu ku jiro sideed sano jir, la dilay intii ay socdeen mudaaharaadyada isu beddelay rabshado rabshado wata oo lala galay bilayska Khamiista iyo Jimcaha.
Ilo wareedyadu waxay intaa ku darayaan in 6 ka mid ah dhibbanayaashu ay ku dhinteen isku dhacyo ka dib salaadii Jimcaha ee gobolka, kuwaas oo goobjoog ka ahaa iskahorimaadkii ugu adkaa ee cambaareeyay sharciga cusub.
6 sarkaal oo booliis ah ayaa lagu dhaawacay iskahorimaadka ka dhacay Uttar Pradesh.
Adeegga internetka ayaa wali waxaa go’ay mas’uuliyiinta dhowr degmo oo gobolka ah, halkaas oo booliisku ay horey ugu dhawaaqeen hirgelinta tillaabooyin looga hortagayo banaanbaxyada ka dhaca 52 degmo ee gobolka.
Uttar Pradesh waxaa ka dhacay mudaaharaadyo waaweyn, Jimcihii, mas’uuliyiinta ayaa markii dambe xiray 350 qof.
Xaaladda laxiriirta, booliisku waxay xireen 15 qof asal ahaan isku dhacyada ka dhacay Jimcihii caasimada New Delhi, ka dib banaanbaxyo waaweyn.
Mudaaharaadyada looga soo horjeedo sharciga qarannimada ee muranka dhaliyay ayaa ka sii socday gobolka Tamil Nandu, iyo sidoo kale magaalada Batna ee gobolka waqooyi-bari ee Bihar, iyadoo dibad-baxayaasha shaqaalaha ay jebiyeen caqabadaha ay hor-istaageen laamaha amniga.
Maamulka Hindiya ayaa faray telefishannada telefishanka inaysan baahin wixii ay ku sheegaan inay yihiin wax “ka soo horjeedda aragtida qaran.”
Waxaana laga soo bilaabo 11 maalmood, wadada Hindiya ayaa la kululaanayay, maaddaama dagaalladu aysan joogsan illaa baarlamaanka uu meel mariyey sharciga cusub.
Barlamaanka Hindiya waxa uu meel mariyey horaantii Bishan Disembar, sharci cusub oo dhalasho siinaya carruurta laga tirada badan yahay ee la dhibaataysan diimeed 3 waddan oo deris ah, haddii ay soo galaan Hindiya ka hor Disembar 31, 2014, laakiin shuruud ku xidhan in aanay muslimiin ahayn, oo waddamadanina yihiin: Bangladesh, Pakistan iyo Afghanistan .
Kooxaha Islaamiga ah, mucaaradka iyo ururada xuquuqul insaanka ayaa rumeysan in sharciga uu qeyb ka yahay barnaamijka Raiisul Wasaaraha Hindiya Narendra Modi, oo ah muwaadin Hindi ah, si loo xaqirayo dadka muslimiinta ah ee ku nool India, oo tiradooda lagu qiyaasay 200 milyan oo qof.